Infinity Microfinance(Infinity Microfinance) in Bizshala: Business, economic and financial news of Nepal -
अधिकांश सूचकमा इन्फिनिटी लघुवित्तको सन्तोषजनक प्रगति, नाफा रु. ४.७४ करोड
काठमाण्डौ । कोरोना महामारीबीच पनि इन्फिनिटी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडले गत आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को चौथो त्रैमासमा सन्तोषजनक प्रगति गरेको छ। संस्थाको सोमबार सार्वजनिक वित्तीय विवरणअनुसार समीक्षा अवधिमा संस्थाको खुद नाफा अघिल्लो वर्षको तुलनामा २६.४१ प्रतिशतले बढेर ४ करोड ७४ लाख रुपैयाँ पुगेको छ। जुन अघिल्लो वर्षको यही अवधिमा ३...
इन्फिनिटी लघुवित्तद्वारा अधिकांश वित्तीय सूचकमा छलाङ, रिजर्भमा २७०% को बढोत्तरी
काठमाण्डौ । चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमासमा इन्फिनिटी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटले अधिकांश वित्तीय सूचकमा आकर्षक छलाङ मारेको छ । दोस्रो त्रैमासमा संस्थाले गत आर्थिक वर्षको यही अवधिमा तुलनामा १५८.१६ प्रतिशत बढीले खुद नाफा आर्जन गर्न सफल भएको छ । संस्था दोस्रो त्रैमास वित्तीय विवरणअनुसार संस्थाले ३ करोड ३४ लाख खुद नाफा आर्जन...
इन्फिनिटी लघुवित्तले डाक्यो वार्षिक साधारणसभा, हकप्रद सेयर र मर्जर प्रक्रिया मुख्य अजेन्डा
काठमाण्डौ । इन्फिनिटी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडले आफ्नो तेस्रो वार्षिक साधारणसभाको मिति र स्थान तय गरेको छ । संस्थाको सञ्चालक समितिको गत शनिबार बसेको बैठकले वार्षिक साधारणसभा आगामी पुस १८ गते नवलपुरको विजयचोकमा आयाजना गर्ने निर्णय गरेको हो । सभामा एक वा एकभन्दा बढी उपयुक्त लघुवित्त संस्थाहरु गाभ्ने/गाभिने वा प्राप्त गर्ने वा...
इन्फिनिटी लघुवित्तको लाभांशमा सामान्य संशोधन, सेयरधनीलाई १५% लाभांश दिने नयाँ प्रस्ताव
काठमाण्डौ । नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशनमा इन्फिनिटी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडले यसअघि प्रस्ताव गरेको गत आर्थिक वर्षको लाभांशमा सामान्य संशोधन गरेको छ । गत भदौ ३० गते बसेको संस्थाको सञ्चालक समितिको बैंकले आफ्ना सेयरधनीहरुलाई गत आर्थिक वर्षको मुनाफाबाट चुक्तापुँजी २० करोड ७४ लाख रुपैयाँको १० प्रतिशतले हुन आउने २ करोड ७ सात ४०...
इन्फिनिटी लघुवित्तले गर्यो १५.७९% लाभांश वितरणको प्रस्ताव
काठमाण्डौ । इन्फिनिटी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडले गत आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को मुनाफाबाट आफ्ना सेयरधनीहरुलाई १५.७९ प्रतिशत लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । संस्थाको सञ्चालक समितिको हिजो सोमबार बसेको बैठकले लाभांश वितरणको प्रस्ताव गरेको हो । संस्थाले चुक्तापुँजी २० करोड ७४ लाख रुपैयाँको १० प्रतिशतले हुन आउने २ करोड ७ लाख ४०...
इन्फिनिटी लघुवित्तको खुद नाफामा २१३.९४% को छलाङ, जगेडा कोषमा ६९८.७८% ले बढोत्तरी
काठमाण्डौ । इन्फिनिटी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को सबै वित्तीय सूचकमा छलाङ मारेको छ । संस्थाले खुद नाफा अघिल्लो वर्षको तुलनामा समीक्षा अवधिमा चौथो त्रैमास विवरणअनुसार २१३.९४ प्रतिशतले बढाउन सफल भएको छ । संस्थाले समीक्षा अवधिमा खुद नाफा ३ करोड ७५ लाख रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गर्न सफल भएको छ । अघिल्लो वर्षको...
सूचीकृत भएको तेस्रो दिनमै इन्फिनिटी लघुवित्तको सेयरमूल्यमा उछाल, लाग्यो पोजेटिभ सर्किट
काठमाण्डौ । दोस्रो बजारमा सूचीकरण भई कारोबार सुरु गरेको तेस्रो दिनमै इन्फिनिटी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडको सेयरमूल्यमा बुधबार उछाल आएपछि पोजेटिभ सर्किट लागेको छ । इन्फिनिटी लघुवित्त र नेपाल स्टक एक्सचेन्जबीच आइतबार सेयर सूचीकरणसम्बन्धी सम्झौता भएको थियो । जसअनुसार इन्फिनिटीको २० लाख ७४ हजार कित्ता सेयर दोस्रो बजारमा...
दोस्रो बजारमा इन्फिनिटी लघुवित्तको सेयर कारोबार सुरु
काठमाण्डौ । इन्फिनिटी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडको सेयर दोस्रो बजारमा सूचीकरण भई सोमबारदेखि कारोबार सुरु भएको छ । इन्फिनिटी लघुवित्त र नेपाल स्टक एक्सचेन्जबीच आइतबार सेयर सूचीकरणसम्बन्धी सम्झौता भएको थियो । जसअनुसार इन्फिनिटीको २० लाख ७४ हजार कित्ता सेयर सूचीकरण भएको हो । नेप्सेले यो कम्पनीलाई प्रि–ओपनिङ कारोबारका लागि...
इन्फिनिटी लघुवित्तको २०.७४ लाख कित्ता सेयर कारोबारमा आउने, ओपनिङ रेन्ज कति ?
काठमाण्डौ । इन्फिनिटी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडको सेयर दोस्रो बजारमा सूचीकरण भई सोमबारदेखि कारोबारमा आउने भएको छ । इन्फिनिटी लघुवित्त र नेपाल स्टक एक्सचेन्जबीच आइतबार सेयर सूचीकरणसम्बन्धी सम्झौता भएको हो । जसअनुसार इन्फिनिटीको २० लाख ७४ हजार कित्ता सेयर सूचीकरण भएको छ । नेप्सेले यो कम्पनीलाई प्रि–ओपनिङ कारोबारका...
यी पाँच देश जहाँ प्रविधिको प्रयोगले बन्दैछ जीवनयापन निकै सहज
काठमाण्डौ । सञ्चारका नयाँ–नयाँ साधनहरुले संसारभरका संस्कृतिलाई नयाँ आकार दिइरहेका छन् । कतिपय ठाउँमा डिजिटल जीवनलाई दैनिक जीवनसँग अलग गर्न मुस्किल भइरहेको छ । हाई स्पिड इन्टरनेट, मोबाइल र क्यासलेस भुक्तान विश्व अर्थव्यवस्थालाई अगाडि बढाइरहेको छ । कतिपय देश अनलाइन सेवा र त्यसको सुलभतालाई बढाएर डिजिटल भविष्यलाई बढावा...
इन्फिनिटीको रिजल्ट आयो, आफ्नो नाम खोज्नुहोस्(पूर्ण रिजल्टसहित)
काठमाण्डौ । इन्फिनिटी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमीटेडको आइपीओ बाँडफाँड भएको छ । निश्कासन तथा बिक्री प्रबन्धक सिभिल क्यापिटलको मुख्य कार्यालयमा एक समारोहका बीच आइपीओ बाँडफाँड भएको हो । आइपीओका लागि आवेदन दिएकामध्ये ६२ हजार ९९३ आवेदकले १० कित्ताको दरले सेयर पाएका छन् । यो कम्पनीले जेठ १३ गतेदेखि १६ गतेसम्म ६ लाख २९ हजार ९३०...
इन्फिनिटीको आइपीओ बाँडफाँड, तपाईलाई पर्यो कि परेन ?
इन्फिनिटीको आइपीओ बुधबार बाँडफाँड गर्ने तयारी
काठमाण्डौ । इन्फिनिटी लघुवित्तको आइपीओ आगामी बुधबार बाँडफाँड हुने भएको छ । निश्कासन तथा बिक्री प्रबन्धक सिभिल क्यापिटल मार्केट लिमीटेडका मर्चेन्ट बैंकिङ हेड विनोद आचार्यले बुधबार बिहान बाँडफाँड गर्ने गरी तयारी अगाडि बढेको बताए । उनका अनुसार सो दिन सिभिल क्यापिटलको सुन्धारास्थित सिटीसी मलस्थित मुख्य कार्यालय परिसरमा एक...
इन्फिनिटी लघुवित्तको आइपीओमा आवेदनको ओइरो, मागभन्दा ११ गुणा बढी कित्ता माग
काठमाण्डौ । इन्फिनिटी लघुवित्तको आइपीओमा मागभन्दा ११ गुणा बढी आवेदन परेको छ । बिक्री प्रबन्धक सिभिल क्यापिटल मार्केट लिमीटेडका अनुसार देशभरबाट यो कम्पनीको आइपीओमा बिहीबार साँझसम्म ३ लाख ३० हजार १३० आवेदकले ६७ लाख १० हजार ८०० कित्ता खरीदका लागि आवेदन दिएका छन् । यो कम्पनीले कुल ६ लाख ७४ हजार ३०० कित्ता आइपीओ निश्कासन गरेको हो ।...